စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 26
အဲလိုထူး – “မှတ် တိုင် မှာ” (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆ မှတ်တိုင်မှာ… အမျိုးကောင်းသမီးလေးက ပန်းရောင်စကတ်တိုကို ပေါင်လယ်လောက်ရောက်အောင် အတင်းဆွဲချနေတယ်။ တယ်လီဖုန်းအပြားလေးကို ဖွင့်ကာပိတ်ကာနဲ့၊ ကားတော်တော်များများက သူမကို စိတ်ဝင်စားကြပေမယ့် သူမကတော့ နှုတ်ခမ်းကို ချစ်စဖွယ် စူထားပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ် အလှအပတွေက… အဲဒီလမ်းအတိုင်း လျှောက်နေကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှု… တစ်မျိုးပြောင်း၊ ဒီတော့ ထားခဲ့ကြပေါ့။ မင်းလောင်းဂိုက် ဖမ်းတာတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး ညှင်းသိုးသိုး၊ ပင်နီဝတ်ကလည်း အမျိုးကောင်းသမီးလေးကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဖျင်ကြမ်းလွယ်အိပ်ထဲက ပါဝါဘဏ်ကို နှိုက်ထုတ်လိုက်၊ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်နှိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးက တစ်ခဏတာဟော့ဂဏန်း။ ပလပ်စတစ်လက်ဆွဲခြင်းထဲ တိုလီမိုလီတွေ ပစ်ထည့်လာတဲ့ အပေါ်ထပ်အကျီနဲ့ မိန်းမကတော့ ကြောက်တာလား လေးစားတာလား ရှိန်တာလားတော့...
​​လင်းသက်ငြိမ် – မနက်​ခင်းတစ်ခု​မှာ​ ပျောက်​ဆုံးသွားသူတယောက်​အ​ကြောင်း (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၆ ဒီ ​နေ့မနက်​စာဟာလည်း ​မေတ္တာဓာတ်​မပါတဲ့အစားအစားပါပဲလို့ သူစားပွဲဘေးထိုင်​ရင်း​တွေးမိသည်​။​ အေးစက်​​နေတဲ့ အစား အစာ​တွေကိုစားပြီး​ အေးစက်​​နေတဲ့ အလုပ်​ဝတ်​အင်္ကျီကိုဝတ်​ဆင်​ပြီး မ​နေ့ကအတိုင်းပဲ အလုပ်​ခွင်​ထဲ ​အေးစက်​စွာပြန်​ဝင်​ရ​ပေလိမ့်​မည်​။ သူ့ဘဝသည်​ အဆင်မ​ပြေမှုများနှင့်​သာ အမြဲတမ်းဖက်​လှဲတကင်း​လွန်းလှသည်​ဟု ​တွေးမိတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်​ပိုင်​ရှင်​​ခေတ်​ရဲ့ပုံရိပ်​များကိုသာ သူမြင်​​ယောင်​မိ​နေသည်​။​ လူကိုလူခြင်း အဖိနှိပ်​ခံရခြင်းသည်​ ​ငွေမရှိသူများရဲ့သမိုင်း​ပေး တာဝန်​လား။ သူ့အ​တွေးတို့ ဟိုဒီပြန့်​ကြဲလို့ ဆယ့်​သုံးနှစ်​သားဘဝက ပန်းရံအလုပ်​သမားဘဝဆီရောက်သွားသည်​။ ​မြေကျင်း တူခဲ့ရတဲ့ဘဝကို​ရောက်​သွားသည်​။ ကြံရည်​တွန်းလှည်း​နောက်​က ကြံ​ချောင်း​တွေကို ကြိတ်​စက်​နဲ့လှည့်​ကြိတ်​​နေတဲ့ဘဝကို​ရောက်​သွားသည်​။ အရက်​ဆိုင်က စားပွဲထိုးဘဝ၊ ကားဝပ်​​ရှော့တခုရဲ့ပညာသင်​ဘဝ၊ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်က စားပွဲထိုးဘဝ၊​ ကုန်​စုံဆိုင်​က အ​ရောင်းစာ​ရေးဘဝ၊ ​ကျောက်​​ခွေ​လောင်း​နေတဲ့ဘဝ၊ စာအုပ်​အငှားဆိုင်​က​လေးဖွင့်​ခဲ့တဲ့ဘဝ၊ အခု ဘဝအချိုး အ​ကွေ့အဖြစ်​မြို့ကြီးတမြို့မှာ ဘဝကိုပစ်​တင်​ထားရပြန်​ပြီ။ အလုပ် ​​တွေသာ...
ဆောင်းလူ – လေ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆ မတူညီ ခြားနားမှုတွေနဲ့အတူ … ခံနုိုင်ရည်ရှိသလောက် အားတင်းထားလုိုက်ပါဦး …။ ဒီလေကုိုပဲ ..ရှုနေရတာ …။ ဒီလေကုိုပဲ … အမော ဖောက်မတတ် … ရှုရှိုက်နေကြရတာ …။ ဟုိုးအရင်ကလည်း ဟပ်ဟပ်ထုိုး ရှုခဲ့တယ် …။ ခုလဲ ရှုဆဲ …။ နောင် ရှေ့ဆက်ပြီး လောဘဇောတုိုက် ရှုရဦးမယ် …။ လေတွေ … ဖောက်ပြန်လာလုိုက်တာ … တခါတလေ …စိမ်းစိမ်းတွေ … လေတွေ … ဖောင်းကာလုိုက်တာ …. တခါတလေ … ပဆုံ့ကြီးတွေ ..ကားခနဲ .ကားခနဲ ..နဲ့ … ဒီလေတွေ...
လင်းသက်ငြိမ် – ကျောင်းဖွင့်​ချိန်​
​ လင်းသက်ငြိမ် – ကျောင်းဖွင့်​ချိန်​ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၆ ဆရာမနဲ့ မ​တွေ့​အောင်​​ရှောင်​​နေမိတယ်​။ သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့ မ​တွေ့​အောင်​​ရှောင်​​နေမိတယ်​။ ချို့တဲ့​သောမိသားစုမှာ အဖြူ နဲ့အစိမ်းကို ကျွန်​တော်​​ဘယ်​လိုဝတ်​ဆင်​ရက်​မှာတဲ့လဲ။ ညီ​လေးနဲ့ ညီမ​လေးသည် ကျောင်းစိမ်းဝတ်​စုံကလေး​တွေကိုယ်​စီနဲ့ လှပ​နေကြသည်​။ ငါ့သားရယ်​​ကျောင်းဆက်​တက်​ပါလို့​ပြောတဲ့ အ​မေ့မျက်​နှာက ဖုံးဖိထားတဲ့ အပူအပင်​​တွေကို ကျွန်​​တော် သိ​နေခဲ့ပါတယ်​။ ကုန်​တင်​ကုန်​ချလုပ်​သားအ​ဖေ့ရဲ့ဝင်​​ငွေဟာ ကျွန်​​တော်​တို့အိမ်​​ထောင်​စုအတွက်​ မ​ပြေလည်​နိုင်​မှန်းလည်း ကျွန်​​တော်​သိခဲ့တာကြာပါပြီ။ ​သောက်​​ရေအိုးဖိုး ​ပေးဖို့ဘယ်​သူ​ကျန်​​သေးလဲဟု​မေးလာတဲ့ ဆရာမရဲ့မျက်​လုံး​တွေက ကျွန်​​တော့်​ဆီအ​ရောက်​မှာ သက်​ပြင်း တစ်​ခုဖြစ်​သွားတယ်​။ တံမြက်​စည်းဖိုးထည့်​ဖို့ ဘယ်​သူကျန်​​သေးလဲလို့​မေးလိုက်​တာနဲ့ စာသင်​ခန်းထဲက ​ကျောင်းသူ​၊​ ကျောင်း သား​တွေရဲ့အကြည့်​​တွေက ကျွန်​​တော့်​ဆီ​ကျောက်​ချထားပြီးသားဖြစ်​၏။ သိမ်​ငယ်​ရ​သော​နေ့ရက်​​တွေကို ကျွန်​​တော်​ရင်​မဆိုင်​လို​တော့ပါ။ အ​ဖေနဲ့အ​မေရဲ့ ဝန်​ထုပ်​ဝန်​ပိုးအဖြစ်​ကို ကျွန်​​တော်​မရယူလို​တော့ပါ။ အိမ်​​ ဘေးနားက ပန်းရံဆရာတစ်​​ယောက်​ဆီအကူအညီ​တောင်းပြီး ပန်းရံလုပ်​ဖို့​ပြောထားခဲ့ပြီး အ​မေ့ကိုဖွင့်​​ပြော​တော့ ဝမ်း...
တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း – ကြတ္တိကာကြယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ ကြတ္တိကာကြယ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေး ပြောပြမယ်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သိပ်မာနကြီးတဲ့ သဌေးသမီး ခုနှစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ လူတိုင်းကို အထင်သေးတယ်။ သူတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါး ကွယ်လွန်တော့ မိဘရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ဆန်စက်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရတယ်။ အဲဒီဆန်စက်မှာ မောင်ကဆုန်နဲ့ မောင်နယုန် လို့ ခေါ်တဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ သဌေးသမီးတွေဟာ အဲဒီညီအစ်ကို ကို မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သဌေးသမီးတွေဟာ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်လို့ ဆင်းရဲသွားတယ်။ အလုပ်ကျိုးစားတဲ့ ညီအစ်ကိုကတော့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်နေ့တော့ သဌေးသမီး ခုနှစ်ဖော်ဟာ ဝမ်းစာအတွက် ဆန်စက်တစ်ခုထဲ ဆန်စေ့တွေ လိုက်ပြီး ကောက်နေကြတယ်။ အဲဒီဆန်စက်ဟာ သူတို့ချမ်းသာစဉ်က...
ခင်စန်းမေ – သိုက်မြုံကျဉ်းကျဉ်းထဲက မျှော်လင့်ခြင်းငှက်ငယ်များ
ခင်စန်းမေ – သိုက်မြုံကျဉ်းကျဉ်းထဲက မျှော်လင့်ခြင်းငှက်ငယ်များ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၅ သာကေတမြို့နယ် ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းနဲ့မနီးမဝေး ကွန်ကရစ်ခင်းလမ်းမကြီး။ အဲ့ကတဆင့် လမ်းမြှောင်လေးတခုထဲကို ၀င်ရင် လူနေအိမ်တွေ တအိမ်နဲ့တအိမ် နီးနီးကပ်ကပ်ဆောက်ထားတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကိုရောက်ပါတယ်။ အိမ်နှစ်လုံးကြားက လူတကိုယ်စာသာဝင်တဲ့ လျှောက်လမ်းကနေ ခြေလှမ်း (၂၀) လောက်လှမ်းလိုက်ပြီး နေအိမ်မကို အဖီဆွယ်ထားတဲ့အခန်းတခုကိုတက်လိုက်ရင် ၀ိုင်းချစ်တို့အသိုက်ကိုရောက်ပါပြီ။ ပျန်းမျှဆယ်ပေ ပတ်လည်မျှသာရှိသည့် အဆိုပါအခန်းငယ်လေးမှာ ၀ိုင်းချစ်တို့ညီအစ်ကိုသုံးယောက် ဦးလေးနှစ်ယောက် အ ဖွားအပါဝင် မိသားစု (၆) ယောက်နေပါတယ်။ တခါးပေါက်က ၄ ပေကျော်ရုံသာရှိတာမို့ ခေါင်းငုံ့ဝင်ရပါတယ်။ ခေါင်းရင်း မှာဘုရားစင် အိမ်တွင်းနတ်စင် ဘယ်ဘက်မှာ ရုပ်မြင်သံကြား၊ အောက်စက်နဲ့ ပန်ကာတို့ရှိနေပြီး ညာဘက်မှာ ဘီရို နဲ့လျှပ်စစ် ထမင်းအိုးဟင်းအိုးတင်ထားတဲ့စင်၊ အခန်းအလယ်မှာ ပလပ်စတစ်ခင်းရှိပါတယ်။...
မင်းညွန့်လှိုင် – ရာပြည့်အတွေးများ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ ဒီနှစ်ဟာထူးထူးကဲကဲ ရာပြည့်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရာပြည့် လူထုဒေါ်အမာ ရာပြည့် မြန်မာကာတွန်း ရာပြည့် . . .စသဖြင့်ပေါ့ ။ ဒီအရင်က ထူးထူးခြားခြားဖြတ်သန်းခဲ့ရတာက မှိုင်းရာပြည့် ။ ၁၉၇၆ ။ အဲဒီနောက်မှာဇော် နဲ့ ဝဏ် တို့ရဲ့ရာပြည့်တွေ ။ လာမယ့် ၂၀၁၆ မှာ ဗိုလ်အောင်ကျော် ရာပြည့် ပြီးရင် ၂၀၁၉ မှာ ဒဂုန်တာရာ ရာပြည့် စတာတွေကို မလွဲမသွေ ဖြတ်သန်းရပါဦးမယ် ။ ဒီ ရာပြည့်...
လင်းသက်ငြိမ် – မိုးကာအင်္ကျီ (အက်ဆေး)
လင်းသက်ငြိမ် – မိုးကာအင်္ကျီ (အက်ဆေး) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ကျွန်​​တော့်​အ​ဖေမှာ မိုးကာအင်္ကျီကြီးတစ်​ထည်​ရှိတယ်​။ ထိုမိုးကာအင်္ကျီဟာ အ​ဖေတို့ရုံးက မိုးရာသီအတွက်​ထုတ်​​ပေးတဲ့ မိုးကာအင်္ကျီကြီးပဲဖြစ်​တယ်​။ကျွန် ​​တော့်​အ​ဖေက မီးရထားဝန်​ထမ်းတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပါတယ်​။​ သာမာန်​အောက်​​ခြေအဆင့်​ ဝန်​ထမ်း​တစ်​​ယောက်​ပါပဲ။ အ​ဖေဟာ ကျွန်​​တော်တို့မိသားစုကို အလုပ်​မျိုးစုံနဲ့ ရှာ​ဖွေ​ကျွေး​မွေးခဲ့သူလည်းဖြစ်​တယ်​။ အခု​မီးရထားဝန်​ထမ်းအလုပ်​ဟာ အ​ဖေ့ရဲ့ နောက်​ဆုံးလုပ်​ငန်းပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အ​ဖေ​ပြော​လေ့ရှိတဲ့စကားတစ်​ခွန်းက​တော့ ​ယောက်ျားဆိုတာ​ ဒေါင်​ကျကျ ပြား ကျကျ ​နေရမယ်​ဆိုတာပါပဲ။ အ​ဖေ့အသက်​သည်​ ငါးဆယ်​​ကျော်​ခဲ့ပြီ။ ပင်​ပန်း​တဲ့အလုပ်​​တွေကို ကျွန်​​တော်​မလုပ်​​စေချင်​​တော့ဘူး။ အ​ ဖေ့ကိုအလုပ်​မလုပ်​​စေချင်​တဲ့ ကျွန်​​တော်​ကိုယ်​တိုင်​က အခုချိန်​ထိတည်​ငြိမ်​တဲ့လုပ်​ငန်းတစ်​ခုနဲ့ မရပ်​တည်​နိုင်​​သေး ဘူး။ ကျွန်​​တော်​လည်း အ​ဖေတူသားလို့ပဲဆိုရမလားမသိပါ။ အလုပ်​အမျိုးမျိုး​ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီး မိသားစုရဲ့ဝန်​ကို တည်​တည်​ငြိမ်​ငြိမ်​ထမ်းနိုင်​မယ့်​လုပ်​ငန်းနဲ့ အခုထိမတိုးခဲ့​သေးဘူး။ စီးပွား​ရေးအသိအမြင်​နည်းပါးခြင်းလို့​ တွေးမိတိုင်း ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို အကြိမ်​ကြိမ်​စိတ်​ပျက်​ခဲ့ရတယ်​။ အ​ဖေနဲ့ အ​မေကို မပူမပင်​​လေးထားနိုင်​ဖို့စိတ်​ကူးဟာ...
ဂျူနီးယာဝင်း – ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ဘယ်တုန်းကစမိတ်ဆက်ခဲ့သလဲ? (အကယ်ဒမစ်ဝီကလီတွင် အပတ်စဉ်ရေးသားနေသော ဂျူနီယာဝင်း ၏ အမေးအဖြေစွယ်စုံကျမ်း) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ မြောက်အမေရိကတိုက်၊ ဂျာမဏီ နှင့် ဥရောပ စသဖြင့်သော တိုင်းပြည်တော်တော်များများ တို့တွင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို ခရစ်စမတ်ရာသီအတွက် အမှတ်တရအဖြစ်သော်၎င်း၊ အမှတ်အသားအဖြစ်သော်၎င်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အစိမ်းရောင်သည် ရှင်သန်ခြင်းဟု အဓိပ္ဗါယ်ဖော် ကြသည်။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်သည် တခြားသော အပင်များ ညှိုးနွမ်းနေစဉ်မှာ သူက စိမ်းလန်းနေသောကြောင့် ယင်းသည် နွေဦးကာလကို ကြိုဆိုသည့်သဘောဟုလဲ သတ်မှတ်သည်။ တချိူ့သော ဥရောပသားများသည် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို တံခါးဝမှာထားခြင်းဖြင့် ကံကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အဖြစ် စတင်မိတ်ဆက်လာတာ နှစ် ၅၀၀လောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။...
Book cover by Tetkatho Sein Tin ခင်စန်းမေ – စောစံဖိုးသင် ၊ သတ္တိရှိတဲ့ ရန်သူ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅ စောစံဖိုးသင်အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် – ကရင်ဗမာ အဓိကရုဏ်းအကြောင်းမပါလို.မဖြစ်ပါ။ ကရင်ဗမာ အဓိကရုဏ်းက လွတ်လပ်ရေးမရခင်က မြောင်းမြမှာ စဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်အပြေး ဂျပန်ကလည်း ယိုးဒယားမှာ ဗမာပြည်ထဲ မရောက်သေးဘူး။ အင်္ဂလိပ်တွေ ဆုတ်သွားအခါ သာသနာကျောင်းတွေမှာ ကျန်ရစ်တဲ့ ပြင်သစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ သီလရှင်တွေကို “သခင်မျိုးဟေ့ – တို့ ဗမာ …” ဆိုပြီး ရှပ်လက်တိုအနီ၊ ဘောင်းဘီတိုအပြာဝတ် ဖော့ဦးထုတ်ဆောင်းတဲ့ သူတွေက စသတ်တာ။ အဲ့တုံးက သခင်ခေတ်နောက် ကရင်ခရစ်ယာန်ဆို အကုန်သတ်တယ် ကရင်တွေကလည်း ဗမာပြန်သတ်၊ ရွာတွေမီးရှို့ တော့ ရွာတွေမှာမနေရဲကြပဲ အားလုံး ထွက်ပြေးရတယ်။ ကရင်ရွာနဲ့ ဗမာရွာတွေက ရောနေတယ်၊ ညဘက်တွေမှာ ထွက်ပြေးရတယ်။ ရွာတွေနားရောက်ရင် သတ်ထားတွေက ပုပ်စော်တွေ နံနေတယ်၊ လူသေတွေကို ခွေးတွေက ဆွဲစား၊ ရွာတွေမှာ...
Page 26 of 38«1...2425262728...38»